♪ Angel Shaper: June 2009
တစ်ခုသောညနေခင်းတွင် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း အေးအေးလူလူ ညနေခင်းသတင်းစာ ဖတ်နေခိုက်တွင် ဖြစ်သည်။ ကလင်ကလင်ဖြင့် ဖုန်းဝင်သံကြောင့် အသာကောက်ကိုင်လိုက်ရာ တဖက်မှ " ဟလို ကာလ်မဲလ် လား " " ဟုတ်ကဲ့ ၊ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်က ကာလ်မဲလ်လဲ ? " ဒီတော့ တစ်ဖက်မှ ဖုန်းမှားသွားသည်ကို သိကာ " ကာလ်မဲလ် တောင် မသိဘူးလား ? အရူး " ဟု အသားလွတ် ကြိမ်းသွားလေသည်။ ဖုန်းချသွားလေပြီ။ ကျွန်တော့်ခေါင်း ပူလာသည်။ မိတ်ဆွေ အလကားနေရင်း အဆဲ၊ အကြိမ်းခံရလျှင် ဘယ်လိုနေမလဲ- အဲသလိုပေါ့ဗျာ။ သတင်းစာ ပြန်ဖတ်သည်။ ဖတ်၍ မရ။ အတော်ကြာမှ သွေး ပြန်အေးလာသည်။ အဲဒီအချိန် ဖုန်းပြန်ဝင်လာသည်။ " ဟလို " ဟုပဲ ထူးရသေးသည်။ တစ်ဖက်မှ ဖုန်းပြန်မှားသွားကြောင်းသိကာ " သြော် မင်းပဲကိုး- သောက်ရူး၊ ငပေါ " ဟုဆဲ ပြန်၏။ ပြန်မထူးနိုင်မှီ ဖုန်းပြန်ချသွားသည်။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ်၍ မရတော့- အသားတုန်လာသည်။ ဘာလဲဗျာ.... လူတိုင်းက ကာလ်မဲလ်ကို သိရမလား၊ မသိတာအပြစ်လားဗျာ၊ အဲ သိစေချင်ရင်လဲ ပြောပါလား? ဆဲရတယ်လို့ - အသားလွတ်ကြီး၊ ပြီးတော့ အဲသလိုပဲ ဆဲကြေးလား?။ ကျွန်တော့် နှလုံး အခုန်မြန်လာသည်။ ကျွန်တော် အတော်ကြာမှ အကြံရကာ သေချာပေါက် သိသော ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုသို့ လှည့်လိုက်လေသည်။ " ဟလို " ..... " ဘာ ဟလိုလဲ.. မြည်းလို အကောင်၊ ငရဲကျမဲ့အကောင်၊ ဖသာရဲ " တစ်ဖက်မှ လူမှာ " ဟေ " ဟု သာ ထွက်နိုင်၏။ နောက် တစ်ခု " ဟလို အမိန့် ရှိ ပါ " " ဘာ အမိန့် ရှိပါလဲ... မြင်းမသား၊ လူလိမ်၊ အလကားကောင် " ။ နှစ်နေရာ ဆက်ပြီး သောအခါ ကျွန်တော် အတော့် ကို နေသာလာသည်။
သို့ ဖြင့် နာရီဝက်ကျော် တစ်နာရီ နီးပါး ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခု ပြီး တစ်ခု ကျွန်တော် ကောက်ဆဲနေသည်။ တစ်ဖက်မှ အသံဝင်နေသူ တစ်ဦး သည် သူ့ တစ်သက်တာ ဘယ်တော့မှ မေ့၍ မရမည့် ကျွန်တော့် အဆဲကို ခံရလေသည်။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှာမူ ရှိုက်၍ ပင် သွားရှာ၏။ အတော်ကြာ ၍ မောလာသောကြောင့် ဖုန်း ချ အနားယူနေခိုက် ဖုန်းသံ ပြန်မြည်နေသည်။ ကောက်ကိုင်လိုက် ၍ " ဟလို " ဟုပင် မပြောရသေး ကောက်ဆဲခြင်းကို ခံရလေသည်။
ခွေးသား၊ လူလိမ်၊ မြည်းမျိုး၊ မျိုးလိင်၊ တဲ့ အမျိုး မျိုး ပဲ အဆဲခံရတာ။
တစ်ချို့ ကိုအဓိပ္ပာယ်တောင် မသိပါဘူး။
အဲသလိုပဲ အဲဒီနေ့ ညနေ ကျွန်တော်တို့တစ် မြို့ လုံး ဖုန်းသံ တစ်ဂွီဂွီ၊ တစ်လင်လင်...... ဆဲဆိုသံ.... ကြိမ်းသံ...... တို့ ဖြင့် ဆူညံ၍ နေလေသည်။
မြို့ ငယ်လေးတစ်ခု လုံး ရှုပ်နေပါပြီ။
ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဂျူးတွေက ဘယ်သူမှကို စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး။
တုံးဆိုတိုက်၊ ကျားဆိုကိုက် ရတယ်ဗျာ။
နို့ မို့ ကျွန်တော်တို့ ဂျူးတွေ အမျိုး ပြုတ်တာ ကြာလပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလိုပဲ အဲဒီညနေခင်းတော့ တစ်မြို့ လုံး ဖုန်း နဲ့ ပဲ ရှုပ်ကြရပါတယ်။
ဤကား ကျွန်တော်တို့ ဂျူးများ၏ စိတ်ဓာတ်ပေတည်း။
သို့ မဟုတ် ခါတိုင်းထက်ပိုပူသော ရာသီဥတုကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
" ဂျူး ၀တ္ထုတိုများ " မှ ကောက်နှုတ်ချက်
(ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို ဘာသာ ပြန်သည် ။)
အလွန် ဖြစ်နိုင်သော အရာ၊ ရယ်စရာ ကောင်းသော အဖြစ်အပျက်ပေတည်း။
ပါးပါးလေးတွေး ပြီး ပေါ့ပေါ့လေးပြုံး ဖို့ 
Labels: ပါးပါးလေးတွေးပြီး ပေါ့ပေါ့လေးပြုံးဖို့ 
တစ်နေ့မှာ လယ်သမားတစ်ဦးရဲ့ လယ်ထဲ ပန်းကန်ပြားပျံတစ်စီး ဆင်းသက်လာတယ်။
ပန်းကန်ပြားပျံထဲကနေ ဂြိုလ်တစ်ကောင် ထွက်လာပြီး လယ်သမားနဲ့ စကားပြောတယ်။
ဘာသာစကားချင်း မတူတော့ ခြေလက် အမှုအရာတွေနဲ့ စကားပြောရတော့တာပေါ့။
သူက ခုနှစ်ပိဿာ ဘယ်လောက်လဲ ထပ်မေးတော့ ငါက ပိုက်ဆံရေနေတဲ့ ပုံစုံနဲ့
ပိုက်ဆံ အရင်ယူလာခဲ့လို့ ပြောလိုက်တာ မ၀ယ်ဘဲ ထွက်ပြေးသွားတယ်ကွာ"။
ဟ ဟာ ဟားးးးးးးးးးးးးးးးး
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်။ ရယ်ရတယ်နော်။
ပါးပါးလေးတွေးပြီး ပေါ့ပေါ့လေးပြုံးဖို့ 
Places In My Heart Will Always Be Saved For You.
The One Person I Can Always Talk To;
For Loving Me In Spite Of Myself,
And Always Putting Me Back On My Feet Again.
For Giving Me Someone To Believe In;
Someone Who Lets Me Know That
There Really Is Goodness And Kindness
And Laughter And Love In The World.
For Being One Of The Best Parts Of My Life,
And Proving It Over And Over Again.
18.66.09 ( Thur; )
ဘယ်ကရမှန်းမသိတော့ဘူး။ သဘောကျလို့ တင်လိုက်တာ။
ငါ့ရဲ့ ဒုတိယဘဝ ဆိုတာ ယုံကြည်စေချင်တယ်။
ပကတိရိုးစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သက်သက်နဲ့သာ
ညှိနှိုင်းယူဖို့ မကြိုးစားခဲ့ကြတာ ဆုံဆည်းခွင့်မရှိလို့ ပဲပေါ့။
အတိတ်အကြာင်းကို ပြန်တွေးမိတိုင်း မျက်ရည် ဝဲမိတတ်တဲ့
ငါဟာ နင့်ကို ဘယ်လိုမှ မေ့လို့ မရပါလား။
ကြည့်စမ်း ခုအချိန်ထိ နင့်ကိုငါ အမြင်ကတ်စရာကောင်းလောက်အောင်
တော်ပါပြီ... တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ဆုံနိုင်ခွင့် ကိုတော့
16.6.09 ( Tue;)
Dad, I'm Blessed To Have Someone Like You As My Father!
14.6.09 ( Sun; )
ကြွက်ဟာ အက်ကွဲနေတဲ့ အုတ်နံရံ ကြားကနေ လယ်သမား လင်မယား၊ အထုပ်တစ်ထုပ်ဖြေနေတာကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေလေရဲ့။ အထဲမှာ ဘာမုန့်များ ပါလေမလဲ လို့စိတ်ထဲက မျှော်တလင့်လင့်နဲ့ ကြည့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ စိတ်ပျက်စွာမြင်တွေ့လိုက်ရတာက ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု။ လယ်သမားကြီးဟာ အိမ်ထဲကတစ်နေရာမှာ သွားချထားလိုက်တယ်။ အဲဒါကို မြင်လိုက်တဲ့ ကြွက်ဟာ အားရပါးရအော်ပြီး လယ်ကွင်းထဲ ပြေးထွက်သွားတယ်။ အားလုံးကို သိစေချင်လို့ အသိပေးတဲ့သဘောပေါ့။ အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ်ဗျို့၊ အိမ်ထဲမှာ
ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ်ဗျို့။ မြေကြီးကို ခြေထောက်နဲ့ ယက်ပြီး
အစာရှာနေတဲ့ ကြက်ဖကြီးက ခေါင်းမော်ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်တဲ့ လေသံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက်တော့ အလကားပါ။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ငါ့ခေါင်းလာမရှုပ်နဲ့ကွာ။
ကြွက်က ၀က်ဘက်ကို လှည့်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ်ဗျ။
လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ၀က်က ကရုဏာသက်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ကြည့်ပြီး
ကြွက်က နွားဘက် လှည့်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် ရှိတဲ့
နွားက ၀ိုး ... ၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်
နှာခေါင်းကိုတော့ ညှပ်စရာ အကြောင်း မရှိဘူးလေ။ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
အော် ... လယ်သမားကြီးရဲ့ ကြွက်ထောင်ချောက်ကို ငါ တစ်ကောင်တည်း
တစ်ညတော့ ဗြောင်း ဆိုတဲ့ အသံက အိမ်ထဲမှာ အတော်လေး ညံသွားတယ်။ အကောင်
တစ်ကောင်ကောင်ကို ညှပ်မိလို့ ကြွက်ထောင်ချောက်က မြည်တဲ့ အသံလိုပဲ။
လယ်သမားရဲ့ မိန်းမက ဘာအကောင်များ မိသလဲလို့ သိချင်ဇောနဲ့
ကြွက်ထောင်ချောက် ရှိတဲ့ဆီ အတင်းကို ပြေးသွားတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ ဆိုတော့
အမြီး ညပ်လို့ ဒေါသ တချောင်းချောင်း ထွက်နေတဲ့ မြွေကို မမြင်လိုက်မိဘူး။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မြွေဆိပ်ကြောင့် အမျိုးသမီးကြီး အဖျားတွေ တက်နေတယ်။
အဖျားတက်နေတဲ့ လူနာကို အားရှိသွားအောင် လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်စွတ်ပြုပ်
လုပ်တိုက်ရတယ် ဆိုတာ လူတိုင်း သိနှင့်ပြီးသားပါ။ ဒါနဲ့ လယ်သမားကြီးဟာ
ကြက်စွတ်ပြုပ် လုပ်ဖို့ လယ်ကွင်းထဲကို ဓါးတစ်ချောင်းနဲ့ ဆင်းသွားလေရဲ့။
အိမ်နီးနားချင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေက လူနာလာမေးရင်း နေကောင်းစေဖို့
နည်းလမ်းကောင်းတွေ လာပြီး ဆွေးနွေးပေးကြတယ်။ တနေကုန်ပဲ ဆိုပါတော့။
နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသမီးကြီး ဘယ်လိုမှ မသက်သာနိုင်ဘဲ
ကွယ်လွန်သွားရှာတယ်။ နာရေးမှာ လူအတော်များများ အသုဘရှု လာကြတယ်။
လာသမျှလူတွေကို ဧည့်ခံဖို့ လယ်သမားကြီး ခမျာ လောက်ငှအောင် အမဲသားဟင်းကို
ကိုကြွက်ကတော့ ဖြစ်သမျှ အားလုံးကို အက်ကွဲနေတဲ့ အုတ်နံရံကြားကနေ
နောင်တစ်ချိန် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါ ငါနဲ့
မဆိုင်ပါဘူးလို့ တွေးလိုက်မိရင် သတိရပါ။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဟာ
ခြိမ်းခြောက် ခံနေရပြီ ဆိုရင် အဲဒီ အန္တရာယ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအပေါ်
ကျရောက်လာတာပဲ။ တခြားသူတွေ အပေါ်မှာ မျက်စိဒေါက်ထောက်ပြီး ဂရုတစိုက်
ရှိသင့်သလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လည်း အားပေးပြီး အစွမ်းကုန် ကူညီတတ်ဖို့
လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဘ၀လို့ ခေါ်တဲ့ ခရီးစဉ်ထဲက
တစ်ဖောင်တည်းစီး ခရီးသွားဖော်ချင်း အတူတူပါ။
ဒါကတော့ တောင်အာဖရိက ကနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စ်မွန်တူးတူးရဲ့
ရှေ့ကပုံပြင်နဲ့မတူပေမယ့် မဆိုင်သလိုနေတဲ့သူတွေအတွက် ဥပမာပေးရာမှာတော့
သူငယ်ချင်း ပို့ ပေးတဲ့ Forward လေး အရမ်းကြိုက်လို့ တင်ဖြစ်လိုက်သည်။
Good Manners Are Important To Live Happily Among People.
To Live Among People Therefore Requires Great Powers Of Endurance
And Abilities Of Mixing With People.
Good Manners Changes One To Accept The Disagreeable Attitudes Of Others
To A Great Stage.
They Also Help To Promote Friendship Among The People Around.
If One Has Good Manners One Is Respected By Those Who Relate With One.
Having Good Manner, Does Not Mean That One Should Be Polite, Understanding And
Sympathetic Only When One Is Outside One's Home But Also Inside One's Own Home.
There Are Many People Who Are Very Kind And Polite To People Outside Their Homes, But Within Their Own Homes They Are Worse Than The Devil Himself.
Such People Do Not Really Have Good Manners. Right!
Having Good Manners Means That We Should Always Be Good To Others. Our Speech And Habits As Well As Our Behavior Should Not Hurt The Feelings Of Others Or Cause Them Any Inconvenience.
We Should Also Not Talk Mad About Others Or Boast About Our Achievements Or Personal Possessions.
We Must Not Laugh At The Weakness And The Failures Of Others.
Further, If We Are Angry We Must Try To Use Words In Such A Way That Others Are Not Hurt.
Firstly, We Must Try To Watch Our Feeling And Need To Know What's Our Mind's Happening.
So That We Could Able To Control Our Mind And Rest Our Motion.
If We Have All These Qualities, We Will Have More Friends And Well Wishers.
We Will Also Have Less Trouble From Others, And Those Who Concern With Us Will Also Learn How To Behave Well.
In This Way, Our Good Manners Will Help To Spread Better Understanding And
Good Will Among Others.
Thus, We Can Live A Happier Life.
So,Let's Ask Our Self Today That Do We Really Have Good Manners?
Let's Try Right Now! And Shape The World.
6.6.09 ( Sat; )